Immisa ayey Eydu Seexdaan? Xisaabiyaha Eeyaha Eeyaha - Caafimaadka
Immisa ayey Eydu Seexdaan? Xisaabiyaha Eeyaha Eeyaha
Hurdadu waa qayb muhiim u ah nolosha eeygaaga, xitaa in ka badan cuntada, laakiin intee in le'eg ayey u baahan yihiin oo maxay muhiim ugu tahay horumarkooda?
U ogolow in aan dib u dhigno safar aan dib ugu noqonno dabayaaqadii 1800-meeyadii, waa xilli aynaan horumar badan ka gaarin tijaabada xoolaha sida aan maanta u joogno. Dr. Marie De Manaceine waxay la dhacsaneyd hurdo yaraanta, waxay xaqiijisay in khalkhal maskaxeed ka dhashay hurdo la'aan, laakiin waxay dooneysay inay wax badan ka ogaato.
Sheybaarka Dr. Manaceine waxay ku qortay toban eeyo oo da 'ahaan jira 2, 3 ama 4 bilood. Intii ay sii wadeen inay quudiso hooyadood, iyadu waxay ku haysay hawlo joogto ah (waxay u diidday gebi ahaanba hurdo).
96-120 saacadood kadib, tobankii eeyo oo dhan way dhinteen.
Waxa xiisaha leh, ayaa ah in eeydu markay gaajoonayaan, la badbaadin karaa 20-25 maalmood kadib. Tani suurta gal ma ahayn markii ay hurdo la ’ahaayeen.
Muxuu Hurdo Muhiim Ugu Yahay Eeyaha?
Caadooyinka Hurdo Eeyaha ee Caafimaadka leh
Jadwalka Hurdada Eeyaha
Immisa Ey Eydu Ku Seexdaan:
Xisaabiyaha Hurdo Eeyaha
Sida Looga Caawiyo Eeyahaaga Hurdo Inbadan
Su'aalaha Hurdada Eey Ka Jawaabeen
Hurdo yaraanta inta ay yar yartahay waxay sababi kartaa hoos u dhaca maskaxda iyo dhibaatooyinka habdhaqanka.
Ku noqoshada Daraasadda Dr. Manaceine , waxay ogaatay in hurdo yaraanta ay si weyn u saameysay maskaxda eeyaha. Maqnaanshaha hurdada, xumaanshaha dufanka, cilladaha xididdada dhiigga iyo dhiig baxa ayaa dhacay.
Maskaxdu waa xarunta taliska nidaamka neerfaha . Waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood oo waaweyn:
Maskaxda maskaxda oo maamusha shaqooyinka aasaasiga ah ee nolosha
Maskaxda maskaxda oo mas'uul ka ah go'aanka
Maskaxda maskaxda oo xakameysa dhaqdhaqaaqa
Waan ognahay sida cunnada ku xaddidan dufanka waxyeello u geysanayaan maskaxda ayna wax ugu kordhin karaan cudurka neerfaha, laakiin hurdo yaraanta saameyn xun ku yeeshay eeyadan.
Hurdadu waxay muhiim u tahay eeyahaaga hawlihiisa muhiimka ah . Waxay qayb ka ciyaartaa ilaalinta tamarta, nadiifinta qashinka maskaxda, isbadalka nidaamka difaaca jirka, garashada, waxqabadka, cudurada iyo xaalada nafsiyeed.
Daraasado badan tan iyo Dr. Manaceine's, ayaa muujiyey taas luminta hurdada inta lagu jiro koritaanka eyda waxay sababi kartaa hoos u dhaca maskaxda, dhimashada neerfaha iyo tan xigta dhibaatooyinka habdhaqanka . Hurdo xumida eeydu sidoo kale waa qayb ka qayb qaadata kiisaska kansarka iyo sonkorowga nooca II.
Hurdo waa u muhiim nolosha eeyahaaga. La'aantiis, waxay si baaxad leh u saameyneysaa xarunta xakamaynta (taasi waa maskaxdooda) waxayna u horseedi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo fara badan oo ka dhalan kara sannadaha dhallinyarada ah
Eeyadu wax badan bay maraan horumar deg deg ah ka badan ilmaha aadanaha u dhigma; tusaale ahaan, celcelis ahaan 7-toddobaad eey yar ayaa u horumarsan sida cunug bini'aadam ah oo 9 bilood jira. Eeyaha sidoo kale waxaa la sheegaa inay si buuxda u bislaadeen meel kasta oo u dhexeysa 1-2 sano jir (waxay kuxirantahay nooca).
Eeyaha si ay u gaaraan bislaansho (caafimaad iyo farxad labadaba), hurdo ayaa lagama maarmaan u ah isbeddelladooda garasho, caqabadaha shucuureed iyo isbeddelka jireed. Eydu waxay adeegsadaan hurdo si ay u xoojiyaan wixii ay barteen maalintaas . Hadday tahay xeelad cusub ama si fudud looga fogaado calaacalka lugaha kursiga.
Waa inaad had iyo jeer ka tagto eey yar oo hurda, si aad u seexato.
Sababtoo ah qaddarka weyn ee eeyaha soo koraya waxay u baahan yihiin inay ku qabtaan muddadaas yar, waxay ku qaataan inta badan labadooda bilood ee ugu horreeya, iyagoo hurda.
Eeyaha waaweyn , Goob shaybaar ah markii keli laga tago, seexan doonaa celcelis ahaan ilaa 13 saacadood maalintii. Eeyadu waa diurnal, taas oo macnaheedu yahay inay firfircoon yihiin inta lagu jiro saacadaha maalinta.
Nasashadu waxay dhacdaa inta lagu jiro xilliyada mugdiga ah iyada oo dhaqdhaqaaqa uu kordhayo labada saacadood ka hor iftiinka; waxay leeyihiin waqti nasasho dabiici ah qiyaastii duhurkii ka dibna waxay yareeyaan waxqabadka inta lagu jiro galabtii.
Eydu waxay seexan karaan meel kasta oo u dhexeysa 18-20 saacadood maalintii . Waxaad ogaan doontaa heerarka dhaqdhaqaaqa sare subaxdii oo ay ku xigto nasasho, ka dibna waxqabad yaraaday abbaaraha duhurkii iyo galabtii.
Waxay seexan doonaan guud ahaan markay ciyaarayeen, baranayaan xirfado cusub, socod ku soo aadeen ama ay cuneen cunno.
Khibradaha ay eeyahaagu leeyihiin inta lagu jiro maalintii waxay saameyn ku yeelan karaan nooca iyo tayada hurdo ee ay leeyihiin. Daraasaduhu waxay ogaadeen in khibrad xun kadib, eeydu ay si dhakhso leh u seexan doonaan. Tan waxaa loo yaqaan hurdo ilaalin ah waana jawaab u ah heerarka buufiska badan.
Mararka qaarkood way fududahay in loo nisbeeyo cunug 'daallan' mashquulka maalinta. Xusuusnow, maadaama caadooyinkooda hurdada ay noqon karaan kuwo muujinaya waxyaabaha ay soo mareen.
Dad badan oo ey cusub leh waxay xoojiyaan 'waqtiga hurdada rasmiga ah' inta lagu jiro habeenkii. Meesha aad rabto eeyahaaga inuu seexdo waa doorbid shaqsiyeed. Milkiilayaasha qaar waxay doortaan inay santuuqa ku tababaraan eeygooda qaarna way ku faraxsan yihiin inay sariirta la seexdaan.
Sanduuqyadu waxay ku fiican yihiin ilaalinta eeyahaaga waxayna gacan ka geysan karaan dhisidda caadooyinka hurdo ee wanaagsan . Waxay noqon kartaa mid faa iido leh inaad u sameysato meel aamin ah eeyahaaga si ay uga caawiso inay ka ilaaliyaan dhibaatada maadaama uu barto inuu kula xiriiro booska hurdo iyo deganaan.
Qaar badan oo eey ah waxay ku fiican yihiin is xakameynta hurdada qaasatan hadaad si buuxda uboodeyso oo aad caajiseyso. Muhiimadu waxay tahay hadii wiilkaaga uu seexdo hurdo oo uu duurjoog yahay, u dhiib hawl qaboojin oo gebi ahaanba aamusnaan oo deggan.
Eeyaha badankood waxay seexan doonaan celcelis ahaan 18-20 saacadood maalintii.
Qeyb weyn oo ka mid ah eygaaga noloshiisa; waxay soo jeedaan oo keliya inta u dhexeysa afar ilaa lix saacadood maalintii . Waa inaad tan maskaxda ku haysaa markaad qorsheyneyso tababarkooda iyo is dhexgalka bulshada .
Kulan kasta oo tababar ah waa in laga dhigaa mid gaaban, waxaa muhiim ah in aan laga badin maadaama aan ognahay khibradaha xun ay saameyn ku yeelan karaan horumarkooda iyo tayada jiifkooda.
8 toddobaad 20 saacadood
10 toddobaad 18 - 20 saacadood
12 toddobaad 18 - 20 saacadood
14 toddobaad 18 saacadood
16 toddobaad 18 saacadood
18 toddobaad 18 saacadood
Xulo da'da eeygaaga:
–Xulo Da’ – 1 Todobaad Old2 Todobaad Old3 Toddobaad Old4 Toddobaad 5 Toddobaad Older 6 toddobaad Old7 toddobaadyo8 toddobaadyo9 Toddobaadkii hore 10 Toddobaadkii hore Toddobaadkii12 Usbuucyo toddobaadyo14 toddobaadyo15 Toddobaadka toddobaadlaha ah17 toddobaadyoToddobaadkaToddobaadkaToddobaadkaToddobaadkaToddobaadkaToddobaadkaToddobaadkaToddobaadkaToddobaadkaToddobaadkaToddobaadkaToddobaadkaToddobaadkaToddobaadkaToddobaadkaToddobaadkaToddobaadka20jeer
Gali da'da eygaaga.
Eeyahaaga ayaa u baahan18saacadood oo hurdo ah maalin kasta!
Labrador Puppy Hurdada
Haddii eeyahaagu ku dhibtoonayo inuu seexdo, waxay u badan tahay inay la xiriirto xaaladdiisa shucuureed.
Markuu dhashay, wuxuu ku jiray qashin qashin ah isaga iyo walaalihiis iyo Hooyo. Si kedis ah, ayaa loo keenay gurigiisa waxaana la filayaa inuu keligiis seexdo. Tani waa hagaajin ballaaran oo qaadan karta dhowr toddobaad ama bilo. Eeyooyinka qaarkood, eyga kale ee guriga degan oo horey guriga ugu jiray ayaa ka caawin kara iyaga inay dejiyaan, laakiin haddii ay yihiin kaligiis pup, markaa waxaad ubaahan kartaa inaad la bilaabato habeenadooda:
Milkiilayaasha qaar waxay doorbidayaan inay ku seexdaan sariirta iyaga oo wata koofiyadooda
Milkiilayaasha qaar ayaa ku faraxsan inay bilaabaan tababarka sariirta qolka jiifka
Ujeedada labada farsamood ayaa ah in ardaygaagu ogyahay inaad u dhowdahay.
Si tartiib ah, waxaad u dhaqaaqi kartaa sanduuqa oo aad uga bixi kartaa albaabka qolkaaga ka baxsan, ka dibna ugu dambeyntii hoose. Ama haddaad fadhido kursiga fadhiga, waxaa laga yaabaa inaad u guurto kursi fadhiga ah oo qol kale ah ka hor intaadan madaxa kor aadin.
Ma jiraan wax caddeyn ah oo muujinaya in u dhowaanshaha eeyahaaga ay sababi doonto goor dambe kala-go'id walaac . Hase yeeshe waxa ka soo horjeedaa waa run; marka ardaygaagu qanco, wuxuu u badan yahay inuu ahaado mid xasiloon.
Sida aan bini'aadam ahaan u jeclaan lahayn, nadaafadda hurdo ee wanaagsan ayaa muhiim u ah ka caawinta horumarinta dabeecadaha hurdo eeyaha ee wanaagsan. Joogtada ayaa lagama maarmaan u ah eeyaha . Waqtiyada quudintu waa cunno wanaagsan, iskuday inaad ku ekaato waqtiyada cuntada ee caadiga ah, laakiin ha ka walwalin socod badan oo ciyaar waqtiga saxda ah maalin kasta.
Qaybta kale ee shaqadaadu waa inaad hubiso wakhti aamusnaan ka hor intaadan seexan. Cashadooda kadib kadib, waxaad xoogaa xasilloonaan sameyn kartaa tababarka adeeca haddii aad rabto, laakiin 1-2 saacadood ka hor intaadan seexan, waa inay nastaan ​​sidaad u raaxaysan lahayd oo kale.
Ugu dambeyntii, hubinta inuu sameeyay jimicsi ku filan iyo ciyaar maalmeedka waa muhiim . Jimicsigu wuxuu lagama maarmaan u yahay kor u qaadista hurdo wanaagsan, yaraynta dabeecadaha halaagga iyo ku xirnaanshaha cunuggaaga.
Da'dee Ayuu Eygu Seexan Karaa Habeenkii?
Arrinta ku saabsan seexashada habeenkii oo dhan wax yar bay ku leedahay waqtiga, waxay ku saabsan tahay kontoroolka kaadiheysta.
Eeyaha iyo waa diurnal, sidaa darteed waxay si dabiici ah ugu dhow yihiin inay soo jeedaan inta lagu jiro saacadaha iftiinka iyo nasashada inta lagu jiro kuwa mugdiga ah. Pups waxay u badan tahay inay awoodaan inay xajistaan ​​kaadiheysta markay shaqeynayaan, laakiin waxaa jira qaanuun suul ah marka tababarka guriga.
Eeyadu waxay xajisan karaan kaadiheysta hal saac bil kasta markay jiraan . Markaad keento ilmahaaga yar ee 8-toddobaad jira, inaad u oggolaato inay sii socdaan wax ka badan laba saacadood oo aan lahayn musqusha ayaa loo ballan qaadayaa inay ku dhammaato shil.
Marka ugu horeysa, markaad tababarka musqusha kujirto, waa fikrad fiican inaad digniintaada dhigto inta lagu jiro habeenkii si loogu sii daayo dheriga. Tartiib tartiib ah ayaa alaarmiga u heli karaa goor dambe iyo hadhow way koraan . Xusuusnow, u daa isaga ka dib ciyaarta, cuntada iyo hurdada ka dib!
Muxuu Eeygu U Hurdaa Inta Badan?
Eygaaga waxaa ku dhaca tiro aad u badan oo horumar ah waqti aad u gaaban:
Maskaxdiisu waxay u baahan tahay inay qaan gaadho
Lafahiisu waxay u baahan yihiin inay koraan
Muruqyadiisu waxay u baahan yihiin inay is xoojiyaan
Wuxuu ubaahan yahay inuu xoojiyo barashada iyo xusuusta
Hurdadu waa shay lama huraan u ah dhammaan hawlahan. Eygaaga ayaa sameynaya horumar u dhigma qof 18-25 jir ah oo bini-aadam ah ku dhowaad laba sano . Macno badan ayey samaynaysaa sababta ay hurdada badan u seexdaan.
Maxaa Dhaca Markii Eydu Aaney helin Nasasho Fiican?
Bini'aadamka, hurdo la'aanta ayaa ah walwal weyn. Ma noqon doonto wax aad u badan oo fidin ah oo si isku mid ah loogu soo jeediyo asxaabteena canine.
Ka hooseeya celceliska kootada hurdada ayaa ah lala xiriirinayo walaac , gardarrada, hoos udhaca jawaabta abaalmarinta, dulqaad jabka yar iyo adkeysiga hoose ee ardayda .
Haddii aad rabto eeygaaga iyo eeygaaga dambe ee qaangaarka ah inay ahaadaan canaan shucuur deggan oo hagaagsan, oo si farxad leh ugu hawlan kobcinta iyo naftooda, waxay u baahan yihiin hurdo ku filan.
Muxuu Eydaydu U Seexan Waayaa Habeenkii?
Haddii eeyahaagu soo jeedo habeenkii, wuxuu u baahnaa musqusha , ama markale, wuxuu si lama filaan ah u ogaan karay inuu keligiis yahay. U daa musqusha, laakiin ha ku mashquulin ciyaarta. Is deji oo ammaana isaga markuu musqusha galayo. Dib ugu soo celi oo si deggan sariirta ugu celi.
Haddii uu had iyo jeer soo jeedo habeenka oo nasashada musqusha aysan umuuqan inay degtay, waxaa haboon inaad dib ugulaabato tillaabooyinka qaarkood halka aad mar labaad isaga ag tihiin.
Edeggee ayay Eydu kici jireen?
Eeyadu waa maalinle, waxay soo toosaan saacadaha iftiinka, waxayna nastaan ​​xilliyada mugdiga ah.
Waa iska caadi inay toosaan isla marka ay qorraxdu soo baxdo. Tani waa farsamada aasaasiga ah ee laxanka wareega .
Haddii ilmahaagu qorraxdu kula soo jeedo, markaa tixgeli inaad u wareejiso qolkooda jiifka qol leh indhooleyaal madow ama daahyo .
Weydii milkiilaha ey kasta oo iyagu waxay kuu sheegi doonaan in wareeggooda hurdadooda ay si aad ah wax ugu beddeleen markii ugu horreysay ee ay qaateen canine:
Jiilaalku dabiici ahaan wuxuu leeyahay waqtiyo iftiin oo gaaban sidaa darteed guud ahaan way fududahay inaad ku dhacdo jadwal caadi ah
Xagaagu wuu adkaan karaa maadaama maalmuhu dheeryihiin (laakiin markaa, waxaad gunno u leedahay inaadan banaanka istaagin barafka inaad ku musqusho xilliga xagaaga!)
Qaar ka mid ah milkiilayaasha khibrada leh ayaa doorta inay helaan eey xilliyo gaar ah sanadka, sidaa darteed waxaa habboon in laga fiirsado haddii aad u malaynayso inaad subaxnimada hore la halgami doonto.
Hurdadu waa qayb muhiim u ah nolosheena, tani waxba ugama duwana eygaaga sidoo kale. Markuu yar yahay, ardaygaagu inta badan maalintooda wuu seexan doonaa. Meel kasta oo u dhexeysa 18-20 saacadood waa gebi ahaanba caadi mana aha wax laga walwalo.
Hurdo la’aan aad u daran ayaa u dhiman karta eyda nooc kasta oo ka mid ah hurdo la’aanta ayaa saameyn taban ku leh garashada, horumarka, dhaqanka iyo xasilloonida shucuurta.
Haddii aan rabno bakoorad si buuxda u bislaaday, caafimaad qaba oo dareen ahaan deggan, waxaan u baahan nahay inaan u oggolaanno eeyaha hurda, inay seexdaan .
Tixgeli sida aad ugu qorsheyneyso tababarka iyo la dhaqanka bulshadaada maxaa yeelay waa wax aad u fudud in lagu buuxiyo saacadahaas yar ee ay soo jeedaan.
Bar qof kasta oo qoyska ka tirsan ahmiyadda ay u leedahay in ilmahaagu u nasto. Dejiso meel aamin ah, meel uu ogyahay inay deggan tahay oo xasilloon tahay, oo uu dib ugu laaban karo marka adduunyadu xoogaa daasho!
Haddii aad dareento isbeddel lama filaan ah oo ku yimid caadooyinkiisa hurdada, ka dib u yeer wicitaanka dhakhtarka xoolaha.
Sagaal Sabab Eey Oohin Iyo Maxaad Ka Qaban Kartaa
Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Midabada Sibiriyanka Ah
Magacyada collies xuduudaha dumarka
dibi mastiif lagu daray shaybaadhka
midabada beagle liin & caddaan
eey xariijimo shabeel leh